एनाबोलिक स्टेरोइड संसारमा सामान्यतया गलत धारणा AASraw
/ब्लग/ग्यालरी/एनाबोलिक स्टेरोइड संसारमा सामान्यतया गलत धारणा
प्रकाशित 10 / 12 / 2019 by 阿斯劳 मा लेखियो ग्यालरी.
यो सामान्य ज्ञान उद्देश्यहरूको लागि मात्र धेरै सामान्य सिंहावलोकन हुनेछ, कसरी गर्ने मार्गनिर्देशन होईन। यसको मतलब यो होइन कि म यसको प्रयोगलाई माफ गर्दछु न त यो प्रयोगको प्रवेश हो।
अक्सर गलत अर्थ लगाइन्छ वा गलत वर्गीकरण गरिन्छ- विभिन्न प्रकारका स्टेरोइडहरू हुन्छन्। Corticosteroids, जो भन्दा खराब साइड इफेक्टहरू छन् Anabolic Steroids, केहि कारणका लागि मिडिया द्वारा असुरक्षित छैनन् र यसको प्रयोग वास्तवमा अधिकतर केसहरूमा स्वीकारयोग्य छ - पेशेवर र कलेजिएट खेल सहित। तिनीहरू प्रायः जलनलाई प्रतिरोध गर्न प्रयोग गर्दछन्। त्यहाँ प्रोजेस्टेरोन पनि छ जुन जन्म नियन्त्रणको प्राय जसो प्रकारहरूमा प्रयोग गरिन्छ र लाखौं महिलाले हरेक दिन लिन्छन्। एनाबोलिक स्टेरॉइड्स (यहाँ AS वा को रूपमा संदर्भित छ AS) अधिकांश व्यक्तिहरू जब उनीहरूले "स्टेरोइड्स" र उनीहरूसँग सम्बन्धित सबै नराम्रा चीजहरू सुन्छन् भने उनीहरूको बारेमा सोच्दछन्।
सबैले बिभिन्न पक्षहरूको अनुभव गर्छन्। कुनै दुई व्यक्ति एक जस्तै छैनन्। सबै व्यक्तिले उही चीज अनुभव गर्नेछन् भन्ने कुरा हास्यास्पद हो। केही मानिसहरु लाईम्बिसिस थ्रेडमा देखाइएको अनुसार यसलाई बुझ्न धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यहाँ केवल एक साइड-प्रभाव छ जुन सबै * पुरुष * प्रयोगकर्ताहरूलाई ग्यारेन्टी गरिन्छ- र त्यो टेस्टिक्युलर एट्रोफी हो।
A) टेस्टिकुलर एट्रोफी- जब तपाईं ठूलो मात्राको पूरक गर्नुहुन्छ टेस्टोस्टेरोन तपाईंको शरीरको HPTA बन्द गर्न थाल्छ (टेस्टोस्टेरोन उत्पादन गर्न रोक्छ किनकि तपाईंको शरीर पर्याप्त भन्दा बढि राम्रो हुँदै गइरहेको छ); छोटकरीमा यसले तपाईंको बल संकुचन गर्दछ। धेरै जसो समय यो देख्न पनि मिल्दैन। हुनसक्छ २%% कटौती, अधिकतम %०%। एकचोटि तपाईं चक्र जानुहुन्छ, तपाईंको PCT चलाउनुहोस् (पोस्ट चक्र थेरापी) तिनीहरू पूर्ण आकारमा फर्कन्छन्। यो स्थायी होईन। केही व्यक्तिहरू एचसीजी चलाउँछन् (मानव कोरियोनिक-गोनाडाट्रोपिन) चक्रमा हुँदा उनीहरूको बलहरू पूर्ण आकारमा राख्नका लागि र यसले पुन: प्राप्तिमा पनि सहयोग गर्दछ किनकि यसले तपाईंको लेडीग कोशाहरूलाई कार्य गर्दछ।
बी) टक्कैपन / कपाल झर्ने: AS ले टज्नेपन वा कपाल झर्ने कारण गर्दैन। यद्यपि यसले प्रक्रियालाई गति दिन सक्छ। यदि तपाईको परिवारमा कपाल झर्छ भने, आश्चर्यचकित हुन सक्नुहुन्छ कि तपाइँ यस प्रक्रियालाई छिटो पार्ने उम्मेदवार हुनुहुनेछ। बिल रोबर्ट्सले दुई अलग प्रकारका स्टेरोइडका बारे लेखेका थिए- प्रकार I र प्रकार II; प्रकार I टेस्टोस्टेरोन, ट्रेन, डेक्का, Sust, आदि जस्तै मुख्य यौगिकहरु र प्रकार II जस्तै भइरहेको Winstrol (stanazolol), dbol, anavar, Masteron आदि अधिकांश व्यक्ति Winstrol र ड्रग जस्तै दोष मास्टरन एनानहट (ड्रोस्टानोलोन) कपाल झर्नेको लागि अपराधीको रूपमा र MPS को बारेमा चिन्तित भएपछि ती औषधिहरू त्याग्न प्रयास गर्नुहोस्, जब त्यस्तो केस-प्रकारको हो भने म MPB (पुरुष बज्नेपन) लाई अरू कुनै प्रकारको औषधि भन्दा धेरै स्पष्ट पार्दछ। र स्पष्ट रूपमा DHT आधारित ड्रग्स (जस्तै डेका) तपाईंको खोपडीमा कठोर हुन गइरहेको छ। यसको मुकाबला गर्ने एक मात्र तरीका भनेको फिन्स्टरराइड (प्रोपेसिया / प्रोस्कार) केही सामयिक रोग प्रकार शैम्पूहरू र केहि अन्य चीजहरू लिएर हो।
ग) एक्ने- केहि मानिसहरु उनीहरुको अनुहारमा फुट्छन्; केहि मानिसहरु आफ्नो छाती वा पछाडि टुक्रिन्छन् ... र केहि व्यक्तिको छाला वास्तवमा खाली हुन्छ। फेरी, सबैजना फरक तरीकाले प्रभावित हुन्छन्।
डी) मलाई लाग्छ यो टेस्टिकुलर एट्रोफी अन्तर्गत कभर गरिएको हुनुपर्दछ र म केवल बिर्सिएको छु। धेरै चोटि म तपाईको डिक सिकोink्ग गर्दै गरेको रूपमा मान्छेहरूसँग कुरा गरिरहेको सुन्न सक्दछु, जब उनीहरूको वास्तवमा तपाईको बलहरू हुन्छन्। त्यसोभए, स्पष्ट पार्न तपाईको डिक सिकोदैन र यसले नासिका स्प्रे लिँदा तपाईको नाक संकुचित गर्छ। यदि केहि भएमा, त्यस ठाउँमा बढी रगत बगेर म तपाईंलाई भन्ने छु कि तपाईं विपरित घटनामा बढी प्रवण हुनुहुनेछ। फेरि यो तपाइँले लिने यौगिकहरूमा निर्भर गर्दछ- केही ड्रका र ट्रेन जस्ता ड्रग्स तपाइँको कामवासनामा धेरै कठोर हुन सक्छ (त्यसैले "डेक-डिक" भन्ने वाक्यांश) र केही केटाले लिने छनौट गरे। ताडालाफिल (सियालिस) (१171596१295-XNUMX -२ -XNUMX-)) वा वायग्रा (तपाइँसँग गर्नुपर्दैन) तर अन्य औषधिहरू जस्तै सिधा अप टेस्ट (कुनै पनि प्रकार) वा dbol तपाइँले भित्ताहरूमा चढाई पाउनुहुनेछ र केवल सींगको रूपमा… .. धेरैजसो केटीहरू जसका पति छन् वा चक्र मा प्रेमी आफ्नो मान्छे चक्र मा भएको, रमाईलो गर्न लाग्छ।
E) "Roid-Rage" - त्यहाँ त्यस्तो कुनै कुरा छैन। यो यति सरल छ। यदि तपाईं एक अस्थिर व्यक्ति हुनुहुन्छ, हो, तिनीहरूले तपाईंलाई ती धेरै अस्थिर बनाउँदछन्। तर फेरि, धेरै अन्य चीजहरू र औषधीहरूले सम्भवतः त्यो पनि निम्त्याउने छ। यदि तपाईं मानसिक रूपबाट अस्थिर हुनुहुन्छ वा मानसिक विकारको पनि पत्ता लागेको छ भने तपाईंले स्टेरोइड लिने कुरामा कहिल्यै विचार गर्नु हुँदैन। म पनि रक्सीको बारेमा भने हुन्छ। धेरै मानिसहरू यसबाट प्रभावित हुँदैनन्। धेरै व्यक्तिहरू उनीहरूलाई राम्रो महसुस गर्छन् जस्तो कि उनीहरूले महसुस गर्छन्। म मान्छेहरू साघुँरो भएको देख्न सक्छु किनकि तिनीहरू थोरै ठुलो र थोरै शक्तिशाली भएका छन्, तर त्यस पनी, “रोईड-रेज” (सरकारी संस्था वा छैन) भनेर रिपोर्ट गर्ने कुनै चीज अश्वशुत हो।
F) मृत्यु / अंग असफलता / आदि।
स्टेरोइड्सले कसैलाई प्रतिकूल प्रतिक्रियाको कारण मर्ने वा उनीहरूको मृत्यु गराउने गर्दैन। कुनै वैज्ञानिक अध्ययन एनाबोलिक स्टेरोइड र मृत्यु को सीधा लिंक देखाइएको छ। मानिसहरूले जाइजलाई देखाउँछन्, तर उनीहरूले उनको हृदय रोग / सर्तको पारिवारिक इतिहासतिर इशारा गर्दैनन् र मलाई लाग्दैन कि शव परीक्षा कहिले सार्वजनिक गरियो? ठूला स्ट्रांगर फास्टरबाट २०० qu को CDC तथ्या qu्क उद्धृत गर्न:
75,000 व्यक्ति एक बर्ष मदिराबाट मर्दछन्
एक वर्ष 435,000 व्यक्ति तम्बाकूबाट मर्दछन्
र एनाबोलिक स्टेरोइडबाट हुने मृत्यु ……:।
स्टेरोइड्सका खतराहरू VASTLY अत्यधिक-अतिरंजित हुन्छन्। Pitbulls को साथ अवस्थासँग धेरै तुलनात्मक छ। एक वर्ष धेरै मानिसहरू नरिवलले टाउकोमा हिर्काउँदा वा केवल भ just्या downमा खसेको कारण मर्दछन्।
हो, यदि स्टेरोइडहरू गलत तरिकाले गरिएको छ भने यो खतरनाक हुन सक्छ। मौखिक स्टेरोइड्स (जस्तै dbol, winstrol, anavar, आदि) हेपाटाक्सिक हो र यदि तपाईको कलेजोमा धेरै कठोर हुन सक्छ यदि अत्यधिक मात्रामा लिईन्छ र धेरै समयसम्म लिन्छ भने ... र यदि चक्रमा हुँदा मदिरा सेवन गर्दछु। यो किन रगत प्यानलहरू पहिले, समयमा, र पछाडि पनी गर्न सिफारिस गरिएको हो। दूध थिस्टल जस्ता चीजहरू लिदा तपाईंको कलेजोमा भार कम गर्न मद्दत गर्दछ।
रक्तचाप लिन सक्छ र शायद माथि जान्छ, फेरी यति अधिक तपाइँ लिने यौगिकहरूमा निर्भर गर्दछ (विशेष गरी मेथेन्ड्रोडेनलोन (डियानोबोल) पाउडर र EQ)। रातो खमीर चामल सेवन गर्दा कोलेस्ट्रॉल र बीपी जाँचमा राख्न मद्दत गर्न सकिन्छ। यो निश्चित रूपले अनुगमित हुन आवश्यक छ। र यो पक्कै पनी एक कारण हो किन तपाई CLEAN खान सक्नुहुन्थ्यो चक्रको बखत - पिज्जा, बर्गर र फ्राइज खानुहुदैन।
अन्य गलत धारणा
स्टेरोइडहरूले इंट्रामस्क्युलरली लिइरहेका हुन्छन् - नसकिने रूपमा। तपाईको पाखुरा वा जेसुकैले पनि कुनै ब्यान्डिंग ब्यापिंगमा छैन। यदि तपाईंले शिरा वा स्नायु अन्तमा इन्जेक्सन गर्नु भएको थियो भने तपाईं सम्भाव्य रूपमा मर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ खास इन्जेक्शन साइटहरू छन् - सुरक्षित रहेको बेल्ट, क्वाड, ग्लुटेज, र भेन्ट्रो-ग्लुटेल साइट। व्यक्ति प्रायः गधा / ग्लुट्स सुरक्षित साइट हो भन्ने सोच्दछन्, म असहमत हुने हुनाले यो पुग्न गाह्रो छ र किनकि सायाटिक स्नायु त्यो क्षेत्रको नजिकै दौडन्छ र यदि तपाईंले त्यसमा हिर्काउनुभयो भने, तपाईंको बाँकी जीवनको लागि शुभकामना छ।
स्टेरोइड्स एक चमत्कार औषधि होईन र होईन। तपाईं एउटा ओछ्यानमा बस्नुहुनेछ र आलु चिप्स खान सक्नुहुन्छ र सायद ठूलो बन्न सक्नुहुन्छ, तर यदि त्यसो हो भने तपाईंले तिनीहरूलाई लिनुहुँदा के गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईंले आफ्नो पैसा बर्बाद गर्न पनि वास्ता गर्नुहुन्न। तपाईंले अझै काम गर्नु पर्छ। अझै सफा खान छ - म पनि क्लीनर भन्छु। अझै सबै चीजमा नजर राख्नु पर्छ।
प्रो-हार्मोनहरू स्टेरोइडका लागि एक वैकल्पिक विकल्प छैन किनभने तपाईं तिनीहरूलाई GNC / पूर्ण पोषण / जहाँ पनि खरीद गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरू अधिक खतरनाक हुन्छन् र प्राय: त्यहाँ तपाईं वास्तविक पीसीटी औषधिहरू किन्न सक्नुहुन्न र त्यसपछि तपाईं पुन: प्राप्तिको लागि साँच्चिकै, कुनै न कुनै सडकमा हुनुहुन्छ - यदि तपाईं बिल्कुल ठीक भएमा। यति धेरै बच्चाहरु टिआरटी मा आफ्नो बाँकी जीवन को लागी समाप्त भयो यसको कारण। म बुझ्दिन कि यी स्टोरहरू विरूद्ध मुद्दा लगाई सकेपछि मुद्दा चलाइएको छैन।
के MK-677 (Ibutamoren) मांसपेशी निर्माणको लागि राम्रो काम गर्दछ? सर्म समीक्षा [नयाँ]	SARM SR9009 शरीर सौष्ठव को लागी एक पूरा खरीद गाईड